Factorylọ ọrụ akụrụngwa nke China na emeputa | Pijiang
Enwere ike ịhazi usoro nhichapu CIP dịka nha nke biya.Ihe nhicha nhicha nke CIP tumadi nwere mmiri lye, mmiri nhicha mmiri, igwe na-agba CIP na ngwa ndị ọzọ metụtara.The system is compact, easy to ịnọgide na-enwe ma dị ọcha ọcha na- akụrụngwa mmepụta saịtị. A na-eduzi usoro nhicha ahụ kpamkpam, nke na-ebelata oke nke mmetọ nke abụọ, nchekwa siri ike.
Ọ bụrụ na ike nke tank dị obere, enwere ike idozi ihe nhicha na trolleys. Ọ bụ ọrụ dị mfe nhicha tankị.
Ngwaọrụ Igwe nju oyi na-enye mmiri igwe na-aga n'ihu na-aga n'ihu na ebe ana - ere mmiri na ịgbari gbaa ụka.
Ọrụ nke mmiri mmiri Glycol bụ maka iji wrt jụrụ ma na-agba agba agba mmiri nke wort. Ngwa ihe eji eji igwe anaghị agba nchara SUS304.
Igwe ulo ebe a na-aru oru nke ukwuu, dikwa mfe oru ma di nfe imuta ya karie ihe di iche igwe anaghị agba nchara.
Enwere ike ịgụnye usoro ezumike ụlọ abụọ, arịa ụlọ okpukpu atọ na arịa ụlọ anọ dịka usoro chọrọ na ọnụ ọgụgụ ha si dị ukwuu. Capacitydị ike karịrị akarị, arịa ndị ọzọ karịrị ma ị nwekwara ike ịhọrọ ụdị mgbakọ ọgbakọ dị elu, melite arụmọrụ ọrụ. .
Mpaghara a na-arụ ọrụ
Dayameta ọdọ mmiri
Ulo elu ulo oru
Usoro gbaa ụka na-agụnye ngwa oso gbaa mmiri na tank. A na-eji akwa nchara 304 mee nke ọma nke ihe gbaa agba. Onyinye a gosipụtara na a ga - eji ezigbo ihe eji arụ ọrụ rụpụta ihe. Npụpụ dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị, na-eji igwe anaghị agba nchara, matte, electroplating, ọla kọpa na ụdị ndị ọzọ. Manholes, CIP bọọlụ nhicha, mita mmiri larịị, valvụ nlele na ihe ndị ọzọ na-akwado. Nzube nke 60 Celsius conical nke ala nwere ike melite ọdịda nke yist biya. Site na iji teknụzụ ndị na-emepe emepe mba ụwa, nyocha data ntanetị nke oge a nwere ike ime nyocha ihe dịpụrụ adịpụ.
Ngwaọrụ jụrụ oyi na-ebunye chilling na-aga n'ihu maka sisịkwa mmiri na usoro ịgba ụka.
Usoro njikwa PLC